ညီလင်းသစ်: တောင်ကုန်းများရှိရာ အရပ်ဆီ...
Posted by ညီလင်းသစ် au 18.10.12
တကယ်ကို သွားချင်စရာကောင်းလိုက်တာ ..
အဲ့လို တောင်တန်းတွေ မြင်ရတာ အရမ်းသဘောကျတယ် ..
တော့....၊သားသားလေးပုံကလည်း တကယ့် ချစ်စရာ
ပုံလေးတွေ စာလေးတွေက သေသေသပ်သပ်နဲ့ အမြဲဖတ်လို့ကောင်းတယ်။ ဒေသန္တရ ဗဟုသုတ ခပ်ပါးပါး လွှမ်းခြုံထားပြီး ကိုယ့်ခံစားချက်ရယ် ပျော်ရွှင်ကြည်နူးစရာ အတွေ့အကြုံလေးတွေရယ် ရောယှက်ထားတဲ့ ကိုညီလင်း ပို့စ်လေးတွေက စာဖတ်သူကို မငြီးငွေ့ရအောင် ဆွဲဆောင်နိုင်ပါပေတယ်။ အဆုံးသတ်စာသားလေးကတော့ ဒီပို့စ်ရဲ့ အနှစ်ဆိုပါတော့နော်။
တွဲခိုထားတဲ့ မမြင်ရသော ကြိုးကလေးတွေ ကြာရှည်တည်တံ့ ခိုင်ခံ့ပြီး အန္တရာယ်ကင်းစွာ လေဟုန်စီးနိုင်ပါစေရှင် ... ။
အပေါ်က မမေပြောသွားတာတွေက ဇွန်ပြောချင်တာနဲ့ တစ်ထပ်တည်းရယ်။ ပုံတွေ သိပ်လှတာပဲ... ရောက်ဖူးချင်လိုက်တာနော်... :)
ကျေးဇူးပါရှင် လှပတဲ့ မြင်ကွင်းလေးတွေအတွက်
လှလိုက်တဲ့ ဆွစ်ဇာလန်ရဲ့ ရှုခင်းတွေ...
ှုရှုခင်းက လှပါတယ်ဆို ဓာတ်ပုံဆရာကလည်း လက်စွမ်းပြထားလိုက်တာ..
နီးများ နီးရင် ချက်ခြင်းကို ပြေးလာချင်စိတ်ပေါက်အောင်ကို ဆွဲဆောင်အား ကောင်းလှတယ်။
ကိုညီလင်းသစ်သားလေးလည်း တဖြေးဖြေးနဲ့ ထွားလာပြီနော်.. ချစ်စရာကောင်းတယ်
မြင်ကွင်းတွေ စိတ်ကြည်နူးစရာကောင်းသလို စာရေးသူရဲ့ အရေးအသားကလည်းကောင်းဆိုတော့ ပို့စ်တစ်ပုဒ်ဆိုလည်း တစ်ပုဒ် ထိထိရောက်ရောက် ပါပဲလားနော်။ ဗဟုသုတတွေယူရင်း မောင်ညီလင်းတို့ မိသားစု တည်းခိုတဲ့ ဟိုတယ်ကြီးဆီကို သွားရကံကြုံချင်ပါ့း) သံမဏိဖန်လုံးကြီးတွေနဲ့ တောင်တန်းကြီးတွေ သဘောကျလို့။
တကယ်ကိုလှတဲ့နေရာပဲအစ်ကိုရေ...ရိုက်ချက်တွေကလည်းကောင်းလိုက်တာဗျာ....။ တိမ်နေထူနေတဲ့ရာသီဥတုလည်းကြိုက်တယ်..နေရောင်အောက်ကရှုခင်းကိုလည်းကြိုက်တယ်...။ ရေတံခွန်ဘေးနားက လမ်းကလေးကနေအောက်ဆင်းကြည့်ချင်တယ်...Lord of the Rings ထဲက Mordor ဆီသွားတဲ့လမ်းလိုဘဲ...။ ရေကူးကန်နဲ့ပုံကတော့ ပြက္ခဒိန်ကာဗာထက်တောင် ပိုကောင်းတယ်လို့ထင်တယ်...။ ဟိုတယ်ကနည်းနည်း ခေတ်ဆန်တယ်ထင်တယ်... သစ်သားတွေနဲ့ Rustic ဖြစ်မယ်ဆိုရင်တော့ ကျွန်တော့်အကြိုက်ဘဲ..ဟဲဟဲ..။ သားကကြီးလာပြီ...ရုပ်လည်းနည်းနည်းပြောင်းသွားသလိုဘဲ..။
သားလေးတောင် တော်တော်လေး ကြီးလာပြီနော်...
တော်သေးတာပေါ့ နောက်နေ့နေသာတော့ ကောင်း ကင်ပြာပြာနဲ့ ပုံလှလှလေးတွေ ရိုက်နိုင်တာ။
ကျမတော့ ဂျာမန်စကားက ခက်လို့ မပြောကြတာမဟုတ်ဘဲ ပြင်သစ်စကားပြောတဲ့ လူတွေကိုယ်နှိုက်က သွးကြီးပြီး သူတို့စကားပဲ သူတို့ပြောချင်ကြလို့လို့ ထင်တယ်။ နောက်တခုက ဒုတိယကမ္ဘာစစ်ကြောင့် ဂျာမန်ကို နိုင်ငံတော်တော်များများက မုန်းနေကြလို့လည်း ဖြစ်မယ်။ :D
တစ်လက်နဲ့ ဟုိုးအဝေးကြီးတွေထိစပ်စပ်စုစုလျှောက်ကြည့်မယ်။လက်လှမ်းမှီရာမြင်ကွင်းထဲရောက်လာတဲ့ ငှက်တွေကြည့်မယ်။ စိတ်တုိုင်းကျကြည့်ပြီးသွားပြီဆုိုရင်တော့ခုံတန်းလေးပေါ်မှာပက်လက်လှန်လှဲပြီးကောင်းကင်ကြီးကိုမော့ကြည့်ရင်းတိမ်တွေသွားနေတာကြည့်ပြီးလတ်ဆတ်တဲ့
စိတ်ကူးနဲ့ တင်ကျေနပ်သွားပြီကိုညီလင်းသစ်ရေ။း)
နေရာလေးကလဲလှ အစ်ကိုက စာရေးကောင်းလွန်းတော့ ဖတ်လို့ကို မဝဘူး.... သားသားလေး ရေကူးသွားဖို့ ပူဆာနေပုံလေးကို မျက်စိထဲမြင်ပြီး သဘောကျသွားတယ်... အဲနေရာလေး ရောက်ဖူးချင်လိုက်တာ... လေထီးလဲ ခုံကြည့်ချင်ပေမယ့် အစ်ကိုပြောသလိုပဲ မမြင်ရတဲ့ သံယောဇဉ် ကြိုးတွေကို တွဲခိုနေတာ အသားကျနေလို့လားမသိဘူး မြင်ရတဲ့ လေထီးကြိုးတွေပေါ် ဘဝတစ်ခုလုံးမပုံအပ်ရဲလောက်ဘူးးးးးး :)
ကိုညီလင်းရဲ့ စာတွေထဲမှာ ခရီးသွားတဲ့ အကြောင်းနဲ့ ကြိုကြား ကြိုကြားတွေ့ရတတ်တဲ့ မအိမ်သူ အကြောင်းတွေအကြိုက်ဆုံး။ ခုလဲ စာကိုအစအဆုံး ၂ခေါက်လောက်ပြန်ဖတ်ရင်း အားကြ၊ ကျေနပ်၊သွားချင်စိတ်ပေါက်သွားပါတယ်။
phonetics တွေကို ရေးထားတာသဘောကျတယ်ဗျာ။ ကျွန်တော် ၁၀တန်းအောင်တော့ YUFL ပြင်သစ်စာ မေဂျာဗျ။ ၂ နှစ်သာကုန်သွားတယ် ပထမနှစ်ကမတက်တော့ ထွက်လိုက်ရတယ်။ ဟီးဟီး.. အန်နီးဝေး.. Les photos sont magnifiques!
ကိုညီရေ.............ဓါတ်ပုံလေးတွေကို အရမ်းသဘောကျတယ်.....။ သားသားကလည်း ချစ်ဖို့ ကောင်းလိုက်တာ.။ သစ်သား တံတားကျယ်ကျယ်ပြန့် ပြန့် ကြီးမှာ လမ်းလျှောက်ရတဲ့အရသာမျိုး.......အပြင်ဖက်တွေမှာလုပ်ထားတတ်တဲ့ ...သစ်သားလှေခါးမှာ တက်ဆင်းရတာမျိုးတွေကို ကြိုက်တယ်။ ၀ရံသာကနေ ငေးရတဲ့အရသာဆိုတာကတော့ ပြောဖွယ်ရာမရှိပေါ့.......။ ပြီးခဲ့ တဲ့ နှစ်ပတ် ကမ်းခြေသွားတော့....နေလည်ခင်း အချိန်ကောင်းကြီး မိုးတွေ အသားကုန်ရွာတော့ အတူသွားတဲ့သူငယ်ချင်းတွေက စိတ်ဓါတ်ကျပေမယ့် ကိုယ်တစ်ယောက်တည်း မှန်တခါးက လိုက်ကာလေးဆွဲဖွင့်ပြီး ခုံလေးဆွဲထိုင်....ကမ်းခြေဖက်ကို လှမ်းငေးရတဲ့အရသာနဲ့ တင်ကို တန်နေပြီလို့ကျေနပ်နေတာ.။ တကယ်ပါ....မိုးရေပေါက်ကြီးတွေနဲ့ဖွေးနေတဲ့ ကမ်းခြေရယ်....အခန်းရှေ့ ကုန်းလျှောလေးက သစ်ပင်တွေနဲ့မြက်ခင်းစိမ်းစိမ်းကြီးရယ်...မိုးပေါက်ကြီးတွေရယ်...အေးချမ်းပြီး လှနေလိုက်တာများ.......။ ဒါနဲ့အပမ်းမကြီးဘူးဆိုရင်... camera ၀ယ်မလို့နည်းနည်းလမ်းညွှန်ပေးပါလား.....။
ဟုတ်တယ်ဗျ၊ အဲဒီမြင်ကွင်းက အတော်လှတယ်...၊
ဟမ်... အပိုင်း ၂ မရှိတော့ဘူးလေဗျာ၊း) ဒါအကုန်ပဲ ကိုညိမ်းရ..၊ ခရီးက တစ်ရက်ခရီးဆိုတော့ ဘာမှ အထူးအထွေ မရှိဘူးဗျ...။း)
လေဟုန်စီးနေရင်း လေနွေးစီးကြောင်းတွေထဲ ရောက်မသွားဖို့ သတိထားရမယ်၊ တော်ကြာ စထရာတိုစဖီးယား အလွှာကျော်သွားမှ ဒုက္ခ..၊း) ဆုတောင်းလေးအတွက်လည်း ကျေးဇူးပါဗျာ..၊
ကျနော် ဇွန့်ကို ပြန်ရေးချင်တာကလည်း အပေါ်က မမေကို ရေးလိုက်တာနဲ့ တစ်ထပ်တည်းရယ်..၊းP ဒီကမ္ဘာလေး တစ်ခုထဲမှာ နေကြသူအချင်းချင်း မရောက်နိုင်ဘူး ဆိုတာ မရှိပါဘူးဗျာ၊ အနှေးနဲ့ အမြန် ဖြစ်လာမှာပါ..၊း)
အခုလို အားပေးတာ ကျေးဇူးပါဗျာ..၊
အင်း.. မချောသာ လာမယ်ဆိုရင် စိတ်ဝင်စားနိုင်တဲ့ အစီအစဉ် တစ်ခုလည်း ရှိတယ်ဗျ၊ ဝိတ်လျှော့နေတဲ့ သူတွေအတွက် တောင်ပေါ်တက်တဲ့အခါ ကေဘယ်လ်ကားကို ပေးမစီးဘဲ ဒီအတိုင်း လမ်းလျှောက်တက်ခိုင်းတဲ့ အစီအစဉ်လေ..၊း) (ချစ်ခင်သော စိတ်နဲ့ စတာပါ မချောရေ..)း)
ကျေးဇူးအများကြီး တင်ပါတယ် တီတင့်ရေ..၊
Hey.. long time no see, huh? :) Good to see your comment again..!!! Hope things are ok.
အဲဒါကြောင့် ရေတံခွန်ဘေးက လမ်းကလေးကို တစ်နေရာရာမှာ မြင်ဖူးသလိုပဲလို့ ထင်နေတာ..၊ အခု ညီပြောမှပဲ သိသွားတော့တယ်၊း) နောက်တစ်ခါကျ အဲဒီကိုသွားရင် Aragorn လို အဝတ်အစား ဝတ်ပြီး သွားကြည့်ဦးမယ်...၊း)
ဒုတိယကမ္ဘာစစ် ကိစ္စက အခုထိ ဂျာမန်တွေအပေါ် သက်ရောက်မှု ရှိနေတုန်းပဲ ဆိုတာ မှန်ပါတယ်၊ ကျနော် သိရသလောက် ပြင်သစ်နိုင်ငံက ပြင်သစ်တွေက သူတို့စကားမှသူတို့ ဆိုတဲ့ စိတ်မျိုး ရှိကြတာ မှန်ပေမယ့် ပြင်သစ်စကားပြောတဲ့ ဆွစ်တွေကတော့ အဲဒီလောက် မဟုတ်ပါဘူး၊ သူတို့က Hochdeutsch ပြောဖို့ ဝန်မလေးကြပေမယ့် ဆွစ်ဂျာမန် ဒိုင်ယာလက်ခ်ကို မပြောချင်ကြတာဗျ၊ အဲဒီ စကားက အသံထွက် ပိုခက်သလို နေရာပေါ် မူတည်လို့ ဒိုင်ယာလက်ခ်တွေလည်း များလှတာကိုး၊ အခန့်မသင့်ရင် သိထားပြီးသား Hochdeutsch တောင် ပျက်သွားနိုင်တယ်လေ...၊း)
Wow... အိုင်ဒီယာ တယ်ကောင်းပါလား၊ မအိုင်အိုရာရဲ့ စိတ်ကူးဉာဏ် ကွန့်မြူးပုံကိုတော့ သဘောကျသွား ပြီဗျို့..၊း)
ညီမလည်း ‘လေထီး’ ထက် ‘မြေကြီး’ ကိုပဲ ပိုပြီး တွယ်တာသူပေ ပဲလား?း) အေးဗျာ.. ချစ်သူ၊ ခင်သူတွေနဲ့ ကျန်းမာစွာ အတူရှိရတဲ့ အဖြစ်က တန်ဖိုးထားချင် စရာပဲ မဟုတ်လား...နော၊
အခုလို သေသေချာချာ အချိန်ပေးပြီး လာဖတ်သွားလို့ တကယ်ပဲ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျာ..၊
YUFL မှာ တက်ခဲ့တာလား၊ ပထမနှစ်မှာ ၂ နှစ်တက်ခဲ့တာ ဆိုတော့ ပြင်သစ်စာကို အခြေခံကျကျ လေ့လာမယ်ဆိုတဲ့ စိတ်ကူးနဲ့ပဲ ဖြစ်ရမယ်..၊း) Merci pour ton commentaire! :D
ပုံလေးတွေကြည့်ပြီး ခရီးမထွက်ဖြစ်တာတောင် ကြာပါပေါ့လို့ စိတ်ထဲဖြစ်သွားတယ် ပျော်စရာကြီး
ပုံတွေလည်း လှတယ် ။
ကြုံရာ၊ ကျရာ အခြေအနေထဲမှာ အလှတရားကို မြင်အောင် ကြည့်တတ်တဲ့ အဲဒီလိုစိတ်မျိုးရှိတာ ကောင်းတာပေါ့ဗျာ၊ လူအများစုက ကမ်းခြေဆိုရင် နေသာနေမှ သဘောကျတာ မဟုတ်လား၊ တဖွဲဖွဲ ကျနေတဲ့ မိုးစက်တွေအောက်မှာ အုန်းပင်တွေ ယိမ်းနွဲ့ နေတာကို ကြည့်ရတာလည်း ‘ကဗျာ’ တစ်ပုဒ်ပါပဲ..၊း) ကင်မရာနဲ့ ပတ်သက်လို့ ဘာအများအစား စိတ်ဝင်စားလဲ၊ ဘတ်ဂျက် လျာထားငွေ ဘယ်လောက် ရှိလဲ.. စတာတွေကို nyilinnthit@gmail.com ကို ပို့ပေးမလား? ကျနော်သိသလောက် ပြောပေးပါ့မယ်..။
ကိုညီ.........မေးလ်ပို့ လိုက်ပါ့မယ်..........။ ကြိုတင်ကျေးဇူးတင်ထားပါတယ်နော်......။း)
သွားရောက်လည်ပတ်ချင်စရာပဲ ဒကာတော် ကိုညီလင်းသစ်ရေ။ ရေကူးဝတ်စုံဝတ်ထားတဲ့ ဒကာရဲ့သားလေးကိုမြင်တော့ တရုတ်သိုင်းကားတွေက ကွန်ဖူးသင်နေတဲ့ ကလေးတွေကို မျက်စိထဲ မြင်ယောင်မိတယ်။
ကျနော်က ပြောမယ့်သာ ပြောရတာပါ၊ တကယ်တမ်းမှာက မြင်ရတဲ့ လေထီးကြိုးတွေပေါ် ဘဝတစ်ခုလုံး ပုံအပ်ပြီး စွန့်စားလိုက်ဖို့ထက် မမြင်ရတဲ့ သံယောဇဉ် ကြိုးတွေကို တွဲခိုပြီး အန္တရာယ်နဲ့ ဝေးရာမှာ လေဟုန်စီးချင်စိတ်က ခပ်များများရယ်...
interesting place. great!
OMG!!!! ရှုခင်းတွေလှလိုက်တာ သွားလည်ချင်တယ် အဲလို သဘာဝတောတောင်တွေထဲ လျှောက်သွားရတာကို အရမ်းကြိုက်တယ် ကိုညီလင်း ခေးလေးအရမ်းချစ်ဖို့ကောင်းတာပဲ သူရေကူးရတာတော်တော်ကြိုက်ပုံရတယ်နော်...။ ဟိုသစ်သားထိုင်ခုံလေးမှာ ကိုညီလင်းပြောသလို သက်တံဆယ်စင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ ဇိမ်ကျချက်နော်...။ နောက်ဆုံးတစ်ကြောင်းရေးထားတာလေးကြိုက်တယ်။
28.10.2012 နေ့ ကျမတို့ Luzern ကိုရောက်မယ်။
တရုတ်ကျောင်းကသူတွေနဲ့ လာကြမှာ...နေ့ ချင်းပြန်ပဲ။
ရှုခင်းတွေက တော်တော်ကို လှတယ်... အစ်ကိုဓာတ်ပုံရိုက်ချက်တွေကလဲ တော်တော်ကို ကောင်းတယ်... ရေးထားတာလေးကလဲ ဆွဲဆောင်မှုရှိတယ်... ခုလို ဗဟုသုတလေးတွေကို ဖတ်ခွင့်ကြည့်ခွင့်သိခွင့်ရလို့ ကျေးဇူးပါ အစ်ကို...
BRO, AMAZING POST AND PHOTOS. YOU WRITE LIKE A POET WOULD WRITE HIS POEM . THANK YOU FOR SHARING YOUR TALENT AND YOUR SPIRIT WITH US.
I can't keep lol when i read your writing about Swiss German.That's exactly the same what my two younger sons said about their weakness in it.Thanks for the photoes n the map where i drove around.BTW Tha Tha changed alot.Nice to see his picture.
ဘလော့တွေမရောက်တာကြာလို့ လိုက်လည်နေတာ... အကို့ဆီပြန်ရောက်လာတော့လည်း ဘလော့လေးကအရင်အတိုင်း ကြည်နူးစရာ သိပ်လှတဲ့ဓာတ်ပုံလေးတွေနဲ့ သပ်သပ်ရပ်ရပ် အရေးအသားလေးတွေပြန်ဖတ်ရတော့ သဘောကျမိတယ်..... သားလေးတောင် တော်တော်ကြီးနေပြီဗျာ...... သူကလေး.. သဲပြင်တွေပေါ်မှာဆော့ရင်း ဘာဘီကျူးစားနေကြတဲ့ပုံလေးတင်ထားတဲ့ ပို့စ်တုန်းကနောက်ဆုံးရောက်ဖြစ်တာပဲ..... ကျွန်တော်ငယ်ငယ်လေးကတည်းကမက်ခဲ့တဲ့ အိပ်မက်တွေကို အကို့ပုံတွေထဲမှာမြင်ရတာ ကျေနပ်မိတယ်.... ဆွစ်စ်ရဲ့အလှနဲ့ ရာသီဥတုကို မူလတန်းကျောင်းသားဘ၀ထဲက သိပ်သဘောကျခဲ့တာ... တစ်ဘဝလုံးမှာ သွားလည်ဖို့တစ်နေရာပဲအခွင့်အရေးရှိမယ် ဆိုရင်အဲဒါ ဆွစ်စ်ပဲ.... အကို့ကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်.... :)
အကို့ ခရီးသွားပို့စ်လေးတွေ ဖတ်တိုင်း ခရိးထွက်ခဲ့သူလို စိတ်ကို ကြည်လင်လန်းဆန်းစေတယ်အကို... ဂျာမန် စကားကြောင်း ဝေဖန်ထားတာတွေ့တော့ ပြုံးမိသွားတယ် အဟီးးး ကိုယ်တွေ့မို့လေအကို ..:P
ဟုတ်တယ် အကိုပြောသလိုပဲ မမြင်ရတဲ့ သံယောဇဉ်ကြိုးက မြင်နေရတဲ့ သံမဏိ သံဘောင်တွေထက် ပိုခိုင်မာနေသလိုပဲ ...:)
ဒါနဲ့ စကားမစပ်အကို.... ညီမလေး " ဒန် " သွားတာဖြစ်မယ်နော်အကို ...:D
အားပါး ဓာတ်ပုံတွေက ရှယ်ပဲဗျို့ . သားတောင် တော်တော်လေး ကြီးလာပြီ..ထိုင်ခုံလေးရယ်၊ သံမဏိလုံး ဓာတ်ပုံလေးကို အကြိုက်ဆုံးပဲ..
Nice photos & post..
september rain(moe) said...
photo ရိုက်ချက်တွေက့ မိုက်တယ် ဗျို...
အဲ့လ်ပ်စ် တောင်တန်းတွေကိုလည်းသဘောကျတယ် လှတယ်...
ခရီးသွား ရှုခင်းတွေ သဘောကျလို့။ ခရီးသွားပို့စ်လေးတွေ ရေးတဲ့ ဘလော. ကိုဝင်ဝင်ဖတ်ဖြစ်တယ်...
အိပ်မက်ထဲ မှာတော့ လေဟုန်စီးဖူးပါရဲ့......:)
ဗဟုသုတ ရလို့ ကျေးဇူးပါ ..........